वृद्धका बैरी प्रचण्डः न बाबुको मान राखे, न असल बाबु बन्न सके ! – " सुलभ खबर "
वृद्धका बैरी प्रचण्डः न बाबुको मान राखे, न असल बाबु बन्न सके !
काठमाडौं– पोखरामा दिएको एक अभिव्यक्तीका कारण नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले विवादमा तानिएका छन् । शनिवार कास्की–२ मा हुने प्रतिनिधी सभाको उपनिर्वाचनको लागि नेकपाले आयोजना गरेको सभामा कांग्रेस उम्मेदवार खेमराज पौडेल माथि गरेको टिप्पणी प्रचण्डका लागि महँगो परेको छ । प्रचण्डले पौडेलाई देवघाट जाने उमेरमा उम्मेदवार बनेको भन्दै व्यंग गरेका थिए । तर, प्रचण्ड तीनै हुन्, जसले न बाबुको मान राखे, न असल बाबु नै बने । बने त केवल वृद्धका वैरी ! प्रचण्डको अभिव्यक्ति पछि जेष्ठ नागरिकले उनको विरोध समेत गरिरहेका छन् ।
प्रचण्डका पिता स्व.मुक्तिनाथ दाहाल हुन् । २०६८ असोजमा निधन भएका मुक्तिनाथले बाचुञ्जेल त प्रचण्डबाट छोरोले गर्ने भरथेग पाएनन्, मरेपछि हिन्दु संस्कार अनुसार पिण्ड पनि पाएनन् । देवघाटधाममा पिता मुक्तिनाथको पार्थिव शरीरमा दागबत्ती दिदा प्रचण्डले छालाको जुत्ता, छालाको पेटीसहित सर्ट पाइन्ट लगाएका थिए । हिन्दु संस्कार अनुसार दाहालले गरेको दाहसंस्कार विधि गलत रह्यो र मृत्युपर्यन्त पनि प्रचण्डका पिताले सुख पाएनन् ।
आफ्नै पिताको सुखदुखमा कहिल्यै काम नलागेका प्रचण्डलाई लागेको छ सबै ज्येष्ठ नागरिकहरु देवघाट जानुपर्छ । जहाँ उनका पिताको दाहसंस्कार भएको थियो । धेरैले प्रचण्ड, जसले बाचुन्जेल आफ्ना वृद्ध बाबुको मान राख्न सकेनन्, आफू असल अभिभाव बन्न सकेनन् उनले ज्येष्ठ नागरिकको अपमान नगरेकै ठीक भनेर सुझाव दिएका छन् ।